अनुमानित खुद्रा विश्लेषणका लागि सामाजिक चेक-इनहरू प्रयोग गर्दै Martech Zone
अनुमानित खुद्रा विश्लेषणको लागि सामाजिक चेक-ईन्स प्रयोग
शनिबार, अप्रिल 30, 2016 शुक्रबार, अप्रिल 29, 2016 Douglas Karr
हामीले हाम्रो उद्योगमा कम्पनीहरूसँग धेरै परामर्श गरेका छौं जुन बहुमूल्य डाटाको विशाल गोदामहरू विकास गरेका छन्। प्राय: जसो यी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको मार्केटिंगको प्रभाव बढाउन, उनीहरूको बजार सेयर बढाउन, र उनीहरूको उत्पादन र सेवा प्रस्तावहरूको आधारमा चुनौती दिईन्छ। जब हामी उनीहरूको प्लेटफर्महरूमा थोरै गहिरो खन्दछौं, यद्यपि हामीले भेट्टायौं कि उनीहरूले डाटाको पहाडहरू स've्कलन गरेका छन् जुन प्रयोग नगरिन्छ।
यहाँ ईमेल मार्केटिंग उद्योग भित्र केहि उदाहरणहरू छन्:
किन ईमेल मार्केटिंग कम्पनीहरू बेन्चमार्क प्रदान गर्न सक्षम छैनन् अवधारण, क्लिक गर्नुहोस्, खुला र रूपान्तरण डाटा उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरूको लागि तिनीहरूको सफलता मापन गर्न? म सजिलैसँग हेर्न सक्दछु कि कसरी मेरो सूची अधिग्रहण र अवधारण प्रयासहरू समान कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दछ उस्तै फिर्माग्राफिक्स भएकोमा मैले राम्रो गरिरहेको छु वा छैन भनेर।
किन ईमेल मार्केटिंग कम्पनीहरू भविष्यवाणी विश्लेषण प्रदान गर्न सक्षम छैनन् कि तपाईंको ईमेल सूचीमा सदस्यहरूको वृद्धि र गुणस्तरको आधारमा बिक्रीको पूर्वानुमान गर्छ? के तपाईंलाई आफ्नो ग्राहकहरूको रिसेंसी, गतिविधि, भूगोल, र डेमोग्राफिक्सको आधारमा मूल्य पनि थाहा छ?
किन ईमेल मार्केटिंग कम्पनीहरूले केन्द्रीय ईमेल भण्डारहरू निर्माण गर्न सक्षम छैनन् जसले स्वचालित रूपमा खाताहरूमा ईमेल ठेगानाहरू अद्यावधिक गर्दछ, वा तिनीहरूलाई हटाउँदछ जब तिनीहरू एक खातामा बाउन्स गर्छन्? किन ईमेल मार्केटिंग कम्पनीले उनीहरूलाई सोधदैन कि यदि तिनीहरू एकल प्लेटफर्ममा सबै साझा ग्राहकहरु बीच आफ्नो जानकारी अपडेट गर्न चाहान्छन्?
यदि तपाईंले डाटा खोल्न थाल्नुभयो भने, तपाईं तुरून्त देख्नुहुनेछ कुनै कम्पनीको लागि यी प्रक्रियाहरू र डाटा हुनु कत्ति अचम्मको हुनेछ। तपाईंको आफ्नै सूचीको साइलो भन्दा सबै मार्केटर्समा बुद्धिको पहुँचमा आधारित निर्णयहरू कल्पना गर्नुहोस्?
यहाँ सामाजिक मिडिया उद्योग भित्र केहि उदाहरणहरु छन्।
किन ट्विटर जस्तो प्लेटफर्मले लिंक बुद्धिको निर्माण गर्दैन? जुनसुकै सर्टरनर वा जसले लि promot्कको प्रचार गर्दछ, ट्विटरले डेटाको एक पागल मात्रा प्रदान गर्न सक्छ जुन उनीहरूको सामग्री, पदोन्नति, र वकालत कार्यक्रमहरूको प्रभावमा व्यवसायलाई पूर्ण रिपोर्ट प्रदान गर्दछ। लि data्कको जीवनकाल प्रदान गर्ने डेटाको शानदार रूख देख्न सक्षम भएको कल्पना गर्नुहोस् - पीढीबाट, साझेदारी गर्न, पुग्न, क्लिकहरू ... जुन प्रत्येक ट्विटर प्रयोगकर्ताले यसलाई साझा वा रीट्वीट गर्यो ?! मैले यो कुरा गत हप्ता एक व्यवसायमा गरेको थिएँ र उनीहरूले भने कि उनीहरूले यो डाटामा पहुँच गर्न बिलकुल भुक्तान गर्नेछन्। यसको सट्टामा, ट्विटरले केहि प्रदान गर्दैन र हामी पछाडि प्रभाव पछाडि खोजी गर्न को लागी डार्क डेटा र लिंक छोटो बनाउनेहरु मा निर्भर गर्न बाध्य छौं।
यहाँ फोरस्क्वायरबाट एकदम अचम्मको उदाहरण छ। जब चिपोटलसँग खाद्य सुरक्षाको सवालहरू थिए। फोर्सक्वायर स्टोरहरूमा ट्र्यान्डि foot् खुट्टा ट्राफिक मोनिटर गर्न सक्षम थियो र अन्तमा, घाटा हुने भविष्यवाणी गर्नुहोस्:
नतिजा? चिपोटलले आफ्नो पहिलो त्रैमासिक आय घोषणा गरेको छ र फोर्सक्वायरको भविष्यवाणी लक्ष्यमा थियो - a०% गिरावटको साथ। फोर्सक्वायरले घाटा हुने भविष्यवाणी गर्न मात्र सकेन, उनीहरू अझ साहसी भविष्यवाणी गर्न पनि सक्षम छन्।
हामी विश्वास गर्छौं कि समान स्टोर फुटको ट्राफिकमा २%% गिरावट अधिक अर्थपूर्ण संख्या हो जुन सेयर होल्डरहरूले फोकस गर्नु पर्दछ, बरु बिक्रीमा decline०% गिरावटको सट्टा। यसले देखाउँदछ कि चिपोटलले ग्राहकहरूसँग पुन: विश्वास निर्माण गर्दैछ, जुन यसको सफलताको लागि दीर्घकालीन हो। जेफ ग्लुक, फोरस्क्वायरका सीईओ।
म तपाईंलाई पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु श्री ग्लुकको सम्पूर्ण पोष्ट, यो आकर्षक छ!
बुद्धिमत्ता बनाम सुविधाहरू
मैले एउटा कम्पनीसँग काम गरें जुन एक विशाल डाटा गोदाममा १ अरब भन्दा बढी फैक्टोजिटहरू जम्मा गरे, तर तिनीहरू आफ्नो विज्ञापन बजेटको बृद्धिमा केन्द्रित थिए उनीहरूले स and्कलन गरिरहेका डाटाको गुणस्तर र मूल्य भन्दा बढी। हामीले तिनीहरूलाई डेटा सफा गर्न र डाटा वैज्ञानिकलाई काममा राख्न कडा मेहनत गर्‍यौं। उनीहरूले त्यसो गरेनन् र त्यसपश्चात् शटर गरेन ... अपठित डाटाको हिमालको साथ यो अनमोल हुन सक्दछ यदि यो राम्रोसँग मर्मत गरिएको छ र सही तरिकाले खानी गरिएको छ भने।
धेरै कम्पनीहरूले अधिक स्टक राख्दछन् र उनीहरूका सुविधाहरूमा बढी समय लगानी गर्छन्। सुविधाहरू राम्रो छन्, तर ती सजिलै प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ। उपभोक्ताहरूलाई जित्न र व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दतको लागि बुद्धिको कोडको कुनै अंश भन्दा बढी मूल्यवान छ।
डाटा एक अविश्वसनीय सम्पत्ति हो जुन दुई कारणहरूको लागि अपरिचित हुनु हुँदैन:
प्राधिकरण - तपाईंको डाटा खनन र तपाईंको उद्योगको लागि प्राथमिक अनुसन्धान प्रदान गर्दै एक नेताको रूपमा।
मूल्य - एक सुविधा छनौट गरीएको छ जुन कामदारहरूको जीवन सजिलो बनाउँदछ वा डाटा जसले कार्यकारीलाई राम्रो निर्णय लिन मद्दत गर्दछ, म प्रत्येक पटक डाटा छान्नेछु।
तपाईं कस्तो प्रकारको सुनौलो माटोको छेउमा बसिरहनुभएको छ?
टैग: ठुलो डेटाChipotleखुट्टा ट्राफिकफोरस्क्वायरभविष्यवाणी एनालिटिक्ससामाजिक संजाल
वेस्ली कहाँ छ? सानो बजेटमा SXSW सफलता
मान्यता तपाईंलाई दिइन्छ, अधिकार तपाईं द्वारा लिइएको हो